Gatii Gad Cabsuun Hagam Gargaare?
Guraandhalaa 23, 2011
Mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kanaa kaasee gatii gurguurtaa meeshalee hanga tokko gad cabsuun isaa ni yaadatama.
Mummichi ministeera Itiyoophiyaa Mallaas Zenaawwii mana maree bakka bu’uoota uummataaf hasawaa dhagesisaniin, daldalaa irratti to’annaa jabaan kan godhamu ta’uu ibsan. Gatiin gurguurtaa qaala’uu ykn guddachuu ittisuuf immoo mootummaan isaanii tarkaanfi kan fudhatu ta’uu hubachiisan.
Dhiyeenya kana mootummaan gatii gurguurtaa gad cabsuun tarkaanfiin fudhate magaalaalee adda addaa keessatti hagam akka gargaare namonni gaafataman harka caalaan,daldaltonni gatii ofii duraan ittiin bitan irraa waan gad cabeef jecha, hin gurgurru jechun dhoksan,kanaaf yeroo ammaa gabaa irraa waa arganii bituun rakkisaa dha jedhu.
Ituu gatii qaalii isa duraatti deebi’ee akka garaatti argamee wayya jedhu.Daldaltonni gatii guddaan duraan bitan deebisanii akka gad cabsan gochuun ,kufaatiif isaan saaxiluu dha kanneen jedhanis ni jiran.
Dabaala mindaa mootummaan labsees, warraa duraan mindaa guddaa argataa turan daran utube kan jedhanis ni jira.